सबैलाई हसाउने भिमको आफ्नै दुखेसो, हासेर बोल्ने र जोसुकैलाई प्रभाव पार्न सक्ने भिमबहादुर ! – Complete Nepali News Portal
सबैलाई हसाउने भिमको आफ्नै दुखेसो, हासेर बोल्ने र जोसुकैलाई प्रभाव पार्न सक्ने भिमबहादुर !
अनलाईनमा चर्चित भएकाका नवलपुरको गैडाकोट नगरपालिका हर्दिका भिमबहादुर बिक दैनिक १ घण्टा पैदल हिडेर देवघाट आउछन् र पुलमा मागेर आफु अनि आफ्नो परिवार पाल्दै आएका छन् ।
खुट्टामा जुत्ता नलाई ५० वर्ष पुगेका भिमबहादुरलाई हेर्दा लाग्छ बल्ल १३/१४ वर्ष पुगे तर उनलाई हेर्दा त्यस्तो लाग्दैन । उनी भन्छन् म अहिलेसम्म कहिल्यै दुखि भएको छैन । हासेर बोल्ने र जोसुकैलाई प्रभाव पार्न सक्ने भिमबहादुरले यहि स्वभावका कारण धेरैको मन जितेका छन् ।
आर्थिक अवस्था कमजोर बा आमा बुढा छन् त्यस कारण भिमबहादुर कालिकण्डकीको पुल तरेर देवपुर हुदै दैनिक १ घण्टा हिडेर देवघाटमा आउछन् सबैको मन पगाल्छन् र पैसा दिउँ दिउँ जस्तो बनाउछन् । हेर्नुहोस तिनै भिमबहादुरको १ बर्ष पहिलाको केहि दृश्यहरु |